दिदीको नाता लगाएर कल्पना श्रेष्ठलाई मिर्गाैला मिर्गौला दिने यी युवक ! – My Blog
दिदीको नाता लगाएर कल्पना श्रेष्ठलाई मिर्गाैला मिर्गौला दिने यी युवक !
No Comments on दिदीको नाता लगाएर कल्पना श्रेष्ठलाई मिर्गाैला मिर्गौला दिने यी युवक !
प्रहरीको एक साता लामो सक्रियतापछि नक्कली नागरिकता बनाएर मिर्गाैला त’स्करी गर्ने काभ्रेका तीन तस्कर शुक्रबार राति पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक राजन कोइरालाले पीडितको जाहेरीका आधारमा मिर्गाैला तस्करीमा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले आरोपितमध्ये फ’रार रहेकाको खोजी कार्य जारी रहेको बताए । पक्राउ पर्नेमा भुम्लु गाउँपालिका–८ घर भएका ३५ वर्षीय राजकुमार भन्ने कुमार परियार, उनकै भाइ ३३ वर्षीय देवराज भनिने सुरेश परियार र साविक देवभूमि बालुवा गाविस हाल पाँचखाल नगरपालिका–१० घर भएका ३१ वर्षीय राजकुमार भनिने कुमार परियार रहेका छन् । पक्राउ परेका तीनै जना नातेदार हुन् । कुमार र सुरेश दाजुभाइ हुन् भने अर्का कुमार सुरेशको साढुभाइ हुन् ।
बनेपा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष बलराम अधिकारीलाई सोही वडाका पीडित २८ वर्षीय एक युवकले आफ्नो मिर्गाैला तस्करहरुले बिक्री गराएको जानकारी गराएपछि प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्नहरूको खोजी शुरु गरेको हो ।
भारतको कोलकत्तास्थित मुकुन्दपुरमा रहेको एमआरआई अस्पतालमा ५ लाख रुपियाँमा आफ्नो मिर्गाैला बिक्री गरी २०७७ चैत्रमा ती युवक घर फर्किएका थिए । उनलाई दीपक श्रेष्ठ नामको नागरिकता दिलाएर दिदीको नाता लगाएर कल्पना श्रेष्ठलाई मिर्गाैला दिन लगाइएको थियो । पीडित युवाका अनुसार उनीसँगै अरू दुई नेपालीलाई पनि उक्त अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो । ती युवाले अहिले पनि मिर्गाैला तस्करहरूले सातामा चार नेपालीलाई भारतका विभिन्न अस्पतालमा पुर्‍याउने गरेको आफूलाई जानकारी भएको बताएका छन् ।
कसरी बाध्य पारिए मिर्गाैला दिन ?
पीडित २८ वर्षीय युवाका दाजुले पनि ४ लाख रुपियाँ लिएर २०७२ सालको भूकम्पअघि आफ्नो मृर्गाैला बिक्री गरेका थिए । उनी अहिले पातलेगाउँस्थित दाहाल डाँडामा बस्छन् । ससुरालीकै जग्गा कमाएर बसेका दाजु मिर्गाैला बिक्री गर्ने दलाल खोजी गरी कानुनी कारबाही गराउने योजनामा थिए । दाजुको न्यायका लागि लड्ने योजनाका साथ भारत पुगेका ती युवा आफैं मिर्गाैला बिक्री गर्न बाध्य भएको प्रहरीमा दिइएको जाहेरीमा भनिएको छ । पीडित युवाले मिर्गाैला बिक्री गरेर प्राप्त गरेको ५ लाख रुपियाँबाट घर खर्च चलाउँदै गरेको पनि बताए ।
कोशीपारि भुम्लु गाउँपालिका–८ घर भएका सुरेश परियार र उनका भाइ कुमार परियार बनेपा नगरपालिका–५ मा बंगुर पाल्ने व्यवसायमा गर्छन् । कुमार आफैं पनि मिर्गाैला बिक्री गरेर फर्केका व्यक्ति हुन् । पक्राउ पर्ने तीनै जना पहिले इँटाभट्टामा काम गर्दथे । त्यति बेलादेखि नै बनेपा–५ रविओपीका युवासँग चिजजान भएको र तिनै युवालाई पछ्याउँदै बसेका सुरेश र कुमारले थोरै रकमको लोभमा आफ्नै दाइको मिर्गाैला पनि बिक्री गराइदिएका थिए ।
कुमार र सुरेशले पीडित युवाको भक्तपुरको एउटा निजी ल्याबमा ब्लड टेस्ट गराएर वीरगन्ज पुर्‍याएलगत्तै खोलैखोला सीमापारि पु¥याए । भारत लगेको केही दिनसम्म उनलाई एउटा कोठामा राखेर अरू फरार भए । भारत पुगेपछि तिनै युवाले अलपत्र परेकी एउटी युवतीलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गरे । साथमा पैसा नभएकाले चार दिनसम्म खान नपाएपछि फोन गरेर आफूलाई त्यहाँ पुर्‍याउने समूहका सदस्यलाई धम्क्याएका थिए ।
केही दिनपछि अरू नै व्यक्तिहरू आएर उनलाई मिर्र्गौला दिनुपर्छ भनेर ध’म्क्याए । विकल्प अरू नभेटिएपछि नेपाल नै घर बताउने प्रदीप वैद्यमार्फत कल्पना श्रेष्ठलाई मिर्र्गौला दिन ती अपरिचितले नै दीपक श्रेष्ठ नामको नक्कली नागरिकता बनाइदिए । केही दिनको अस्पताल बसाइ, त्यसपछि प्रदीप वैद्यकै घरमा तीन महिना बसेपछि नेपालमै पैसा पाउने भन्दै उहाँलाई घर फर्काइदिए । घर फर्केको केही समयपछि ती युवाले सुरेश परियारमार्फत दुई किस्तामा ५ लाख पाएका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
← २६ करोड रुपैयाँको औषधि असफल, उपचारपछि पनि ११ महिनाकी बालिकाको मृत्यु → जंगलमा एक्लै भेटिएकी युवतीको बयानले आमाबाबु रोए …..